Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif – Ayyaantuu
[ January 22, 2022 ] Ethiopia: Battlefield Ethiopia- Total War mobilization	English
[ January 22, 2022 ] Jawar, Bekele and Gudina start political activities New TDF recruits	English
[ January 22, 2022 ] General Werede and Getachew on frontline – Amhara Fano commanders – Somaliland recognition	Afaan Oromoo
HomeAfaan OromooWaamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif
Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif
Qawween Sabaa fi Dantaa Sabaaf!
Oromummaa kan wareegama ilmaan Oromoo hedduun biqile buqqisuuf tattaafachuun, Oromiyaa lafee gototaan ijaaramuu jalqabde diiguuf yaaluun yakka dha. Wareegama ilmaan Oromoo baasan bilisummaa sabaaf malee ajjeechaa, hidhaa, saamichaa, mancaafamaa fi gadadoo saba Oromoo irraan gahuuf hin turre. Warreen maqaa saba Oromoon aangootti baahes Oromoof oolmaa ooluu malee itti roorrisuu hin malle.
Yeroo ammaa Roorroon Oromoo irra gahaa jiru fiixee irra gahee jira. Haalli kun Oromoo aarsee warraaqsatti seensisaa jira. Warraaqsi kun gaaffii bu’uuraa fi dhugaa waan harkaa qabuuf ummatni warraaqsa kana keessatti hirmaatu tikfamuu qaba malee ajjeefamuu hin qabu. Ilmaan Oromoo qawwee harkaa qabdan qawwee keessan uummata keenya ittiin tiksuuf oolchuun warraaqsichatti hirmaachuun, aantummaa keessan mirkaneessa.
Qawween meeshaa saba ofii ittiin tiksan malee kan saba ofii ittiin doorsisani fi ajjeesan ta’uu hin malle. Qawween saba doorsistu qawwee diinaati. Qawween saba ajjeestus qawwee diinaati. Diinni uummata Oromoo hiyyoomsee, ijoollee hiyyeeyyii qawwee baachisee saba isaanii akka doorsisan, hiraarsan, ajjeesanii fi jilbeeffachiisan dhama’uun toftaa dulloomaa koloneeffattoota irraa barate dha.
Abbaan irree ijoollee hiyyeeyyii qulqulluu erga itti dhimma bahee booda ni yakka, ni hidha, hojii irraas ni ariha. Yeroo aangoo isaa dheereffachuuf aantummaa uummataa waan qabu fakkeeffachuuf seeratti dhihessuun adabuus dandaha. Abbaan irree farra uummataa qofaa osoo hin taane farra miseensota isaatis. Abbaan irree har’a humna qabu fakkaatu, boru ni dadhaba, ni laafa, ni kufas. Loltuun qawwee baatu humna uummataa qawweedhan jilbeeffachiisuu hin dandahu. Abbaan irree ilmaan hiyyeeyyii meeshaa godhatee aangoo isaa tikfachuu yaalee, yakka dalagee, gaafa injifatamuu ni baqata. Kan baqatee fagoo deemuu hin dandeenye harka uummataa galee murtii seenaa fi seeraan gaafatama.
Furmaati uummataa fi qorichi abbaa irree diddaa gama hundaati. Diddaan kun kan uummata guddeessaati. Diddaa uummatni guddeesi gaggeessuf abbaan irree deebbii humnaa kennuu mala. Qajeelfama abbaan irree Miseensota Raayyaa Ittisa Biyyaaf, Polisii Oromiyaaf, Humna Addaa Oromiyaa fi Milishaa Oromiyaaf kennu fudhachuu diduun biyyittiin hokkara hamaa irraa oolcha. Rakkoon biyyittii afaan qawweetiin osoo hin taane gaaffii siyaasaa deebisuun kan furamu dha. Ijoolleen Oromoo saba Oromoo waliin dhaabbadhaa! Abbaa irree uummata keessan irratti dhukaasee ajjeesu ammoo #Sajin_Musxafaa fakkeenya godhachuun afaan qawwee keessan abbaa irreetti galagalchuun seenaa bara baraan yaadatamu hojjedha. Kun dirqama Oromummaa fi Oromiyaa tiksuu dha!
Injifannoo Ummata Oromoof! Qeerroo bilisummaa Oromiyaa, Waxabajjii 7, 2020
Ibsa waloo Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Rakkin Oromo kun itii fufee juchudha?Oromon yomuma bayanataa? Akkaa illalechaa kotii Amas tokkuma cimmesu fi Oromo gidutii wale kabajuu cimissuun barbachissaadha. Oromo gidutii nagaa ummun barebaachissaadha, hala laallaanii tofetaa bafaachuun barebaachissaadha. Hojaa caleqabaamee xumuruun barebaachissaadh. Dhibaa wara siyaasaa irratii ummun barebaachissaadha sadrakaa hundaraatii. Yoo didaamee egaa qabessoo nagadhaan akka rakkinii Oromo bekkaamufi degaraamuu godhu dha. Motuumaan Rakkina Oromo guraa dhowachuun garii hin fakkatuu.
Galaatoomaa!! Waqiin Oromo walliin ha ta’uu,